Ngisho naseChina Yamandulo, okokuqala, i-lemongrass, iberry enezenzo eziningi eziwusizo, yasetshenziselwa izinhloso zokwelapha. Namuhla embonini yezokwelapha yonke imifino yalesi siko ikhula. Kuvame ukutholakala kanye no-Schizandra, etshalwe ngabalimi be-amateur ezindaweni zabo, lapho enza umsebenzi wokuhlobisa.
Ukuzalwa kwalesi sitshalo yiChina, kodwa sekuvame kakhulu eRussia (ikakhulukazi eMpumalanga Ekude), eJapane naseKorea. Ikhula kaningi emithambekeni, esekelwe ngamamitha angu-200 kuya kwangu-400 ngaphezu kwezinga lamanzi. I-Schizandra iyi-shrub efana ne-liana ebizwa ngokuthi i-branch stems ibe nobukhulu obufinyelela ku-2 cm futhi ifinyelele ubude bemitha eyi-15. Ihlanganiswe ngogxolo olubomvu olubomvu olubomvu, oluba lukhuni futhi lungenangqondo ngobudala.
Amaqabunga amahle ombala obala obalayo atholakala kuma-petioles amade (kuze kube ngu-3 cm). Ukuma kwabo kuyi-ellipsoidal, emaphethelweni aphikisayo kancane. Ngasekupheleni kukaMeyi - ekuqaleni kukaJune, isihlahla sihlanganiswe nezimbali ezimhlophe, ezidabukisayo, ezinomnandi othakazelisayo.
Kamuva, endaweni yabo, kwakha izithelo, ekugcineni zivuthwe ngoSepthemba-Okthoba. Amajikijolo omvini waseShayina magnolia ayindilinga, abomvu obomvu. Inyama iyamanzi futhi ithambile, kodwa ukunambitheka kuqondile kakhulu, kuyamunyu. Iphunga, njengalelo lamaqabunga namagxolo, i-lemon, lapho isitshalo sathola igama layo. Ngaphakathi kwebheki ngalinye kunezinhlobo ezimbili ezinamazinso ezinjengezinso. Izithelo ukukhiqizwa cishe 30 kg kusuka 1 hektare.
Inamba enkulu yezingxenye eziwusizo eziqukethwe kulesi sitshalo, yenza kube lula ukuyisebenzisa kakhulu embonini yezokwelapha. Ukuyinkimbinkimbi yabo futhi ngenxa yethonya layo lokwelapha.
Kuningi okwakhiwe namuhla ngamalungiselelo ahlukene ezokwelapha, lapho i-lemongrass ikhona khona. Ubheji balo bucebile kuma-catatechins, anthocyanins, amafutha abalulekile, i-pectin nama-acids e-organic. Umthombo omuhle kakhulu wevithamini C.
Ucebile magnolia umvini namacronutrients, njengethusi (0.1 mg / g), ama-manganese (0.22 mg / g), i-zinc (0.13 mg / g), i-nickel (0.33 mg / g) icebile. Bathola inani elikhulu le-potassium (19.2 mg / g), selenium (33.3 mg / g). Zonke lezi zakhi zinomphumela omuhle emzimbeni womuntu. Azikho izinto ezinobuthi ezitholakalayo.
Ukuphulukisa izindawo zikaSchisandra
Ukuthandwa kwalesi sitshalo kwi-pharmacology kubangelwa ingxenye enkulu ekusebenzeni kwayo nokubuyisela izenzo. Akusizi ngalutho ukuthi abazingeli baseChina, lapho behamba uhambo olude, bahlala behamba nabo ama-berries kaSchisandra. Izakhiwo zalezi zithelo zivuselela isimiso sezinzwa nezisiphazamisi ukusiza ukugcina isakhiwo somzimba, isikhathi eside ukukwenza ngaphandle kokudla futhi ungakhathazeki.
Isithelo somvini we-magnolia siqinisa ukucabanga okuhle, kuvuselela umzimba, kwandisa ukuzivikela kanye nokubona izithombe. Ngaphezu kwalokho, zenza umsebenzi we-cardiovascular and breathing, ukwandisa ukuvinjelwa kwemoto yesigcawu sokugaya, ukukhipha isisu nesisu semisipha. Umthelela wokwelashwa uchazwa amandla okwandisa ukuhamba kwegazi egazini eligulayo, futhi izinto eziphilayo ezisebenzayo kuzo zisiza umsebenzi odidiyelwe wenyama yonke.
I-Lemongrass iyinhlangano yempunga, engenakulinganiswa ekusebenzeni kwengqondo ejulile, lapho ukuhlushwa, ukuhlushwa kanye nokuthembeka kwembono kuyadingeka ikakhulukazi.
Isicelo emithi yokwelapha
Ngokuvamile, imali isetshenziswe ngesisekelo salesi sitshalo uma kwenzeka ukulahlekelwa amandla, ukubuyisela ukusebenza kahle nokusebenza ngokweqile. Izithelo zaso zinconywa kubantu abaye babhekana nezifo ezikhungethe kakhulu. Izakhiwo ze-Toning zazo zisiza ukubhekana nokucindezeleka kwengqondo.
Ama-Tannins afakwe ku-lemongrass ashicilela ekutheni alulame ezifweni zomuthi wamathumbu. Ikhono lokwandisa ingcindezi lichaza ukusebenza kwezithelo ku hypotension. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthatha ngokucophelela kusuka emvinini we-magnolia kulabo ababhekene nokucindezelwa okukhulu.
Njengoba i-asthma, i-bronchitis nezinye izifo zesimiso sokuphefumula, kusetshenziselwa izingxenye ezihlukahlukene zezitshalo ezibizwa ngokuthi. Amajikijolo omvini we-magnolia, ukusetshenziswa okuxoxwa ngawo esihlokweni sethu, kuphumelela ekuboneni okufushane, okwenza imiphumela emihle kakhulu yokwandisa ubuciko obubonakalayo.
Izitshalo, ezilungiselelwe isithelo somvini we-magnolia, usizo olungenamandla, izinhlobo ezehlukene zezimo ezicindezelayo, ukuvimbela umkhuhlane nemifudlana. Amafutha abalulekile, aqukethe isitshalo ngobuningi, ngcono umsebenzi wesibindi nenhliziyo, futhi unesenzo se-antipruritic uma ulwa izinambuzane.
Kuyasungulwa ukuthi ngisho nokususa i-glycogen nokunciphisa izinga likashukela egazini likwazi ukulimala.
Izithelo zalesi sitshalo zisetshenziselwa ukwelapha nokuvimbela kunoma yiluphi uhlobo - olusha, omisiwe, oluqhwa. Kunezindlela eziningi zokulungisa imikhiqizo ehlukahlukene, phakathi kwalokho okuthandwa kakhulu yilezi ezilandelayo:
Ijusi elenziwe ngamajikijolo amasha. It isetshenziselwa ukubuyisela amandla emzimbeni, engeza itiye eyodwa spoonful. Amajikijolo aqoqiwe kumele ahlanzwe futhi afakwe nge-gauze. Ijusi yethululelwa phezu kwezimbiza ezinamanzi, pasteurized futhi zigoqwe imizuzu engu-15.
Ukumnika amajikijolo omisiwe. Izithelo zomvini we-magnolia zifakwa epanini elingaphansi koqweqwe lwawo, lichithe ngamanzi (ngesilinganiso seglasi elingu-1 kuya kwezipuni ezinamafutha aluhlaza) futhi abilisiwe ngamaminithi angu-10, ukuvala isembozo. Khona-ke umhluzi obangelwayo ufakwe, uhlungwa futhi ushukela wengezwa ukunambitha.
Ukuze u-tincture utshwala udinga amajikijolo aqoshiwe ka-Schisandra. Indlela yokupheka nokuthi ungasebenzisa kanjani leli thuluzi kufanelekile ukutshela eminye imininingwane. Amajikijolo alungisiwe agcwaliswa ebhodleleni futhi athulule u-70% ngotshwala ngesilinganiso se-1: 5. Vala ngokushelela isembozo bese ushiya endaweni emnyama izinsuku ezingu-7-10. Ngezikhathi ezithile, ibhodlela kufanele lithunjiswe. Bese usula i-tincture, cindezela amajikijolo bese wengeza konke okulandelayo ku-filtrate. Nika ezinye izinsuku ezingu-2 futhi uhlunga futhi. I-liquid in ibhodlela kufanele ibe yibala ngokuphelele. I-tincture elungile yamajikijolo e-lemongrass isetshenziselwa ukwandisa ukusebenza kahle, ukunciphisa ukukhathala, nokuqinisa ukuzivikela. Kuthathwa amaconsi angu-30 ngosuku ngosuku lwamasonto amathathu.
Amajikijolo anamafutha anamanzi. Leli thuluzi alikona kuphela umphumela wokwelapha, kodwa futhi kunambitheka okumangalisayo. Ilungiselelwe kusuka amajikijolo amaqhwa, ahlanganiswe noju. Inani - ukunambitha. Ukuhlanganiswa kwalezi zokudla ezimbili ezinempilo kunempumelelo kakhulu ngezifo eziningi. Konke ngenxa yokuthi ngamunye wabo uthuthukisa umphumela omuhle womunye. Le nhlanganisela ine-anti-inflammatory, effect sedative, ikhuthaza ukuphuma kwe-bile, iyanciphisa i-cholesterol, ithuthukisa inhlalakahle jikelele. Ungayithatha ngosuku lwesipuni se-teaspoonful kokubili kubantu abadala nabantwana. Ukweqa ngokweqile, ukulala okukhulu, i-beriberi, i-anemia ayikude yonke uhlu lwezinkinga ezingaxazululwa ngosizo lwedivayisi enjalo.
Izithelo zomvini we-magnolia zisetshenziselwa ngempumelelo ukulungiswa kweziphuzo zezithelo kanye nama-syrups. Lezi ziphuzo zinikeza i-vivacity futhi zijabule. Ekuphekeni, kunezinketho eziningi zokwenza nge-lemongrass amajikijolo. Kusukela kubo uthola ujamu ophuzi, ujamu, u-jam ngisho nomama.
Schisandra for isisindo ukulahlekelwa
Izizathu eziyinhloko zokubonakala kwesisindo esiningi ngokweqile - zingabangelwa ukungondleki, ukuphazamiseka kwe-hormonal, ukunciphisa umzimba, ukucindezeleka, umsebenzi omzimba ophansi, njll. I-Schizandra iyinhlangano yemithi engakwazi ukuqeda eziningi zazo ngenxa yezinto zayo ezimangalisayo. Ijwayele ukusebenzisa izinqubo zokunciphisa umzimba, ukunciphisa i-cholesterol, izinga lemvelo le-hormonal. Ngaphezu kwalokho, ngokugqugquzela umzimba, uSchizandra uvumela ukwandisa ukusetshenziswa kwemali. Konke lokhu kuholela ekushiseni kwamafutha.
Izazi zokudla zikholelwa ukuthi ukufafaza kokudla nge-magnolia umvini kunciphisa ukumuncwa ushukela, ukusetshenziswa okudlulayo okungenye yezimbangela zokukhuluphala. Isamba esikhulu sevithamini C, esinezithelo zalesi sitshalo, sijwayelekile ukusebenza komathumbu. Ukusetshenziswa kwamanzi njalo nge-add juice kalamula noma amajikijolo ayo kukuvumela ukuba ulahlekelwe ngu-10 kg wesisindo esiningi.
Musa nje ukuhlukumeza lokhu kudla. Inkambo akufanele ibe ngaphezu kwenyanga, ngoba kungenjalo ukuhluleka kwesisu kungenzeka.
Noma yiziphi izindlela ezisetshenziselwa imithi yesintu kufanele zithathwe kuphela emva kokubonisana nodokotela, ngoba kukhona njalo ukuphikisana. Kubonakala sengathi ngisho nokulimala, okusobala, amajikijolo e-magnolia ayinconywa ngabantu ababhekene nokuqwashisa, ukuphazamiseka kwesisindo somzimba, abanesisindo somfutho wegazi ophezulu, kanye nabesifazane abakhulelwe nabalahlayo.
Ukuqoqwa kwezithelo zikaSchizandra kwenziwa ngokuvuthwa okugcwele. Ngokuvamile lokhu kwenzeka ngoSeptemba, ngaphambi kokuqala kwesithwathwa. Ukubhubhisa kahle kunqunywe, ukuze kungalimazi imivini futhi kuhlakaze indwangu yesaka. Cishe izinsuku ezingu-2 basala kuleli fomu ngaphansi kwe-canopy. Khona-ke amajikijolo athululwa bese efakwa esomile okhethekile amahora angu-6-8. Ukushisa kufanele kugcinwe kusuka ku-45 kuya kuma-55 ° C. Gcina impahla eluhlaza eyomile emasakeni esikhwameni.
I-Schisandra Chinese isitshalo esinemisebenzi eminingi ewusizo. Zonke zazo zide isikhathi eside, ngakho-ke kuyisifiso sokuthatha imali ezitshalweni zayo engxenyeni yokuqala yosuku.
Ucingo yokuhlanza "Android": Uhlelo nendlela ukwenza
Imikhiqizo shiya amabala ku amazinyo akho
Ukukhulelwa okungafunwa: kuhlinzwa, cleaner abborty ke ephephile?
Riddle mayelana endlini izingane
Izinhlobo lezintshe. Lapho uhlala futhi sizodlani intshe? intshe iqanda
Umbhoshongo enkulu Russia: incazelo kanye nezithombe